ကိုဗဈ လူနာမြားအတှကျသတငျးကောငျး - Celefans
HomeLocal Newsကိုဗဈ လူနာမြားအတှကျသတငျးကောငျး
August 6, 2021 Cele Fans Local News Comments Off on ကိုဗဈ လူနာမြားအတှကျသတငျးကောငျး
ကိုဗဈ လူနာမြားအတှကျသတငျးကောငျး မြှဝတောပါ‼️
ကိုဗဈ ကုသရနျရနျကငျးပညာရေးကောလိပျတှငျဖှငျ့လှဈထားသော ကုတငျ ၁,၀၀၀ သို့ လာရနျ လိုအပျသညျမြားမှာ
(၁) ပိုကျဆံ တဈပွားတဈကပျြမှ ယူလာစရာ မလိုပါ။
(၂) ဒသေန်တရကနျြးမာရေးထောကျခံခကျြမှာ ကိုဗဈဖွဈကွောငျးပါရငျ ရပါပွီ။
(၃) Oxygen 93 အောကျရောကျတာနဲ့ဘာလကျမှတျဘာထောကျခံခကျြမှ မပါရငျလဲ ကိုဗဈ Centerမှ လကျခံပေးပါမယျနျော !
အရေးပျေါလူနာမြား လိုအပျရငျ တိုကျရိုကျ ဆကျသှယျပေးပါ။
ဆေးတှေ စကျပစ်စညျးတှတေော့ အစုံအလငျနီးပါးဖွဈအောငျ ကွိုးစားစီစဉျထားပါတယျ။ကိုယျပိုငျ Oxygen Plant ပါပါမယျ၊ကိုယျပိုငျ Lab ပါပါမယျ၊ Portable digital Chest Xray စကျလဲ ရှိပါတယျ ၊ လေးထပျဆောငျကိုလဲ ဓာတျလှကေားတပျဆငျပေးဖို့ နရောပွငျထားပါတယျ ၊ ကူညီပေးနတေဲ့ ကား (၁၇)စီး ရှိ Ambulance ကားအဖှဲ့လဲရှိပါတယျ (Ambulance ကားတှကေို MMTM မှမောငျးဆီလှူပါတယျ)
သို့သျော Demand နဲ့ Supply မြှနိုငျဖို့ရာအတှကျ ထပျမံ၍ကားကူညီပေးလိုသူ ပရဟိတအဖှဲ့မြား နှငျ့ဝယြောဝိစ်စ Volunteer မြားကိုလဲ ဖိတျချေါသလိုတတျကြှမျးသော ဆေးပညာရှငျဆရာဝနျမြားနှငျ့သူနာပွုမြားကိုလဲအားကိုးပါတယျ၊လူ့အသကျတှကေယျဖို့ ကူညီပေးနိုငျသလောကျလေး ဝိုငျးကူညီပေးကွပါ။
အစဦးဆုံးမို့ အခကျအခဲမြားစှာနဲ့ အဆငျမပွတောတှလေဲ တဈပုံတဈပငျပါ သို့သျော ဘယျအခကျအခဲကိုမဆိုမရရအောငျ ကြျောလှားမယျလို့ ဆုံးဖွတျထားကွပွီးသားမို့ အနှေးနဲ့အမွနျ အဆငျပွသှေားမယျလို့ ပါဝငျကူညီနကွေသူအားလုံးကယုံကွညျကွပါတယျ။
(၁) ဒျေါပွုံးပွုံးဝငျးမွငျ့ : 09-5148922
(၂) ဒျေါနုနုယဉျ : 09- 5151511 တို့၏ Viber ဖုနျးနံပါတျသို့CV from
ဘှဲ့လကျမှတျမိတ်တူ မှတျပုံတငျမိတ်တူ ဆမမိတ်တူ(သကျတမျးမတိုးရသေးလြှငျလဲရ) ထံသို့ပေးပို့ပေးကွပါ။
အခွား ကဏ်ဏမြား အတှကျ Volunteer မြား ဆကျသှယျရနျ…..
မစပယျ- 09-761496229 မခမျြးမွဝငျး-09-5010349 မဝငျးရှစေငျမြိုး -09-5023253 မသီတာခိုငျ -09-5159995
ကိုဗစ် လူနာများအတွက်သတင်းကောင်း မျှဝေတာပါ‼️
ကိုဗစ် ကုသရန်ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ကုတင် ၁,၀၀၀ သို့ လာရန် လိုအပ်သည်များမှာ
(၁) ပိုက်ဆံ တစ်ပြားတစ်ကျပ်မှ ယူလာစရာ မလိုပါ။
(၂) ဒေသန္တရကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်မှာ ကိုဗစ်ဖြစ်ကြောင်းပါရင် ရပါပြီ။
(၃) Oxygen 93 အောက်ရောက်တာနဲ့ဘာလက်မှတ်ဘာထောက်ခံချက်မှ မပါရင်လဲ ကိုဗစ် Centerမှ လက်ခံပေးပါမယ်နော် !
အရေးပေါ်လူနာများ လိုအပ်ရင် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ဆေးတွေ စက်ပစ္စည်းတွေတော့ အစုံအလင်နီးပါးဖြစ်အောင် ကြိုးစားစီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုယ်ပိုင် Oxygen Plant ပါပါမယ်၊ကိုယ်ပိုင် Lab ပါပါမယ်၊ Portable digital Chest Xray စက်လဲ ရှိပါတယ် ၊ လေးထပ်ဆောင်ကိုလဲ ဓာတ်လှေကားတပ်ဆင်ပေးဖို့ နေရာပြင်ထားပါတယ် ၊ ကူညီပေးနေတဲ့ ကား (၁၇)စီး ရှိ Ambulance ကားအဖွဲ့လဲရှိပါတယ် (Ambulance ကားတွေကို MMTM မှမောင်းဆီလှူပါတယ်)
သို့သော် Demand နဲ့ Supply မျှနိုင်ဖို့ရာအတွက် ထပ်မံ၍ကားကူညီပေးလိုသူ ပရဟိတအဖွဲ့များ နှင့်ဝေယျာဝိစ္စ Volunteer များကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်သလိုတတ်ကျွမ်းသော ဆေးပညာရှင်ဆရာဝန်များနှင့်သူနာပြုများကိုလဲအားကိုးပါတယ်၊လူ့အသက်တွေကယ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်သလောက်လေး ဝိုင်းကူညီပေးကြပါ။
အစဦးဆုံးမို့ အခက်အခဲများစွာနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေလဲ တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ သို့သော် ဘယ်အခက်အခဲကိုမဆိုမရရအောင် ကျော်လွှားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီးသားမို့ အနှေးနဲ့အမြန် အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ပါဝင်ကူညီနေကြသူအားလုံးကယုံကြည်ကြပါတယ်။
(၁) ဒေါ်ပြုံးပြုံးဝင်းမြင့် : 09-5148922
(၂) ဒေါ်နုနုယဉ် : 09- 5151511 တို့၏ Viber ဖုန်းနံပါတ်သို့CV from
ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ဆမမိတ္တူ(သက်တမ်းမတိုးရသေးလျှင်လဲရ) ထံသို့ပေးပို့ပေးကြပါ။
အခြား ကဏ္ဏများ အတွက် Volunteer များ ဆက်သွယ်ရန်…..
မစပယ်- 09-761496229 မချမ်းမြဝင်း-09-5010349 မဝင်းရွှေစင်မျိုး -09-5023253 မသီတာခိုင် -09-5159995
ကိုဗဈ ကာကှယျထိုးဆေး အတုမြားဖမျးဆီးရမိ